စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက် -
အကောင်းဆုံး စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များပွဲစားစိန့်လူစီယာရှိနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု) စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့် dual Residency၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယပတ်စ်ပို့၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လူစီယာနှင့်စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်လူစီယာမှရွှေဗီဇာ၊ စိန့်လူစီယာမှရွှေဗီဇာ၊ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ရွှေဗီဇာ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယမြောက်ရွှေဗီဇာ၊ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ရွှေဗီဇာ၊ စိန့်လူစီယာရှိနိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီ၊ စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား \_ t စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
Saint Lucia တွင်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 200,000
စိန့်လူစီယာသည်လှပသောကာရစ်ဘီယံကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး ၆၂၆ ကီလိုမီတာကျယ်သောနေရာတွင်နေထိုင်သူ ၁၇၃၉၉၆ ရှိသည်။ စိန့်လူစီယာသည်ကျွန်း၏ကျွန်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသူများပြားလာသောပိုင်ဆိုင်မှုများတိုးပွားလာသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ စိန့်လူစီယာကိုအမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့်ကနေဒါတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သောအဓိကဘာသာစကားမှာ St. Lucia ဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာလူ ဦး ရေ၏အများစုသည်ကျွန်း၏အနောက်မြောက်ဖက်တွင်နေထိုင်ကြပြီးတောင်ပိုင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နုသေးသည်။ ဤတည်နေရာသည်သဘာဝအားဖြင့်တည်ကြည်စွာနေထိုင်သူများအားအေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေရာများဖြစ်သည့် Soufriere နှင့် Marigot Bay တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ စိတ်အားထက်သန်သောနေရာများရှာဖွေနေကြသူများသည် Castries နှင့် Rodney Bay တို့တွင်လုပ်ရမည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သဘာဝရည်းစားများသည်အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်များ၊ ချွတ်ယွင်းချက်မရှိသောရေများ၊ အားဖြည့်ကုန်းမြေများနှင့်ကြွယ်ဝသောမိုးသစ်တောများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လိမ့်မည်။ မြို့နေသူကြိုက်နှစ်သက်သူများသည်ကဖေးများ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့်လူမှုရေးအခမ်းအနားများ - ဥပမာဂျက်ဇ်ဂီတကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် နှင့်အနုပညာပွဲတော်၊ Cruiser များအတွက်အတ္တလန္တိတ်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ် La Margeurite ပန်းပွဲတော်။ စိန့်လူစီယာသည်သဲသောင်ပြင်များ၊ အုန်းလက်များ၊ ပူနွေးသောရေနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများအပေါ်လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အတူကောင်းကင်၌သံသယရှိနေသည်မှာသေချာသည်။ စိန့်လူစီယာသည်မကြာသေးမီကဒေသ၏အကျော်ကြားဆုံးလေ့လာရေးခရီးများနှင့်တက်ကြွသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကန့်ကွက်ခြင်းများဖြစ်လာသည်။ စုံတွဲများသည်ကျွန်း၏ပုံမှန်ပုံမှန်ခမ်းနားထည်ဝါမှုကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲပုံမှန်အားဖြင့်ကြွယ်ဝသောစိန့်လူစီယာ၏ဘဝလမ်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာကိုအနောက်အင်ဒီးစ်ကျွန်းငယ်အ ၀ င် ၀ င်းဒိုးကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်သောစိန့်လူစီယာကိုမာတီနက်နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်ကြားတွင်စီစဉ်ထားသည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းရှိ ၂၃၈ စတုရန်းမိုင်ရှိသောကျွန်းများကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးအနောက်ဘက်တွင်တိတ်ဆိတ်သောကာရစ်ဘီယံပင်လယ်သည်ကမ်းခြေများကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ ကျွန်း၏နှလုံးသားထဲတွင်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောမိုးသစ်တောသည်ခက်ခဲသောတောင်များကိုဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ထို့အပြင်အောက်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်မှည့်သောလယ်ယာမြေများတည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ငှက်ပျောသီးကြီးနှစ်ခုကြားတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ စိန့်လူစီယာမြင်ကွင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမီးတောင်များမောင်းနှင်သည့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုထပ်မံသတိရစေသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပေ ၂၆၀၀ အမြင့်ထက်ပိုသောသမုဒ္ဒရာကိုကျော်တက်သည့်တိုင်နှစ်မြှုပ်ထားသောမီးတောင်တစ်လုံးရှိ Pitons များရှိသည်။
Pitons များသည်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤကျွန်းငယ်လေးသည်အကောင်းဆုံးနိုဘယ်ဆုရှင်နှစ် ဦး၊ ဘဏ္specialistာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဆာအာသာလူးဝစ္စနှင့်အနုပညာရှင်နှင့်ပြဇာတ်ဆရာ Derek Walcott တို့အားကယ်တင်ခဲ့သည်။ စိန့်လူစီယန်သည်“ ခုန်ရန်” (လမ်းပေါ်တွင်ကခုန်ခြင်း) ကိုနှစ်သက်ပြီးကျွန်း၏အခမ်းအနားတစ်ခုသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ မေလကနာမည်ကြီးစိန့်လူစီယာဂျက်စ်ပွဲတော်သည်ကမ္ဘာအနှံ့မှဖျော်ဖြေသူများနှင့်လူစုလူဝေးများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဇူလိုင်လတွင်ပြုလုပ်သောတရားမျှတသောနေ့နှင့်အောက်တိုဘာလတွင်ကျင်းပသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Creole နေ့သည်ကျွန်း၏လွတ်လပ်သော၊ တောက်ပသောယဉ်ကျေးမှုသည်ရိုင်းစိုင်းသောလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲများ၊ ဌာနေဂီတနှင့်အကများဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည်။
မည်သည့်ရာသီသို့သင်လည်ပတ်ပါစေစိန့်လူစီယာကို Calypso, rhythm, zouk, သံမဏိကျွမ်းကျင်မှု၊ soca နှင့်ရက်ဂေးဂီတသံစဉ်များဖြင့်တုန်နေသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သောကြာနေ့ညနေခင်း၌နေထိုင်သူများနှင့်ကြည့်ရှုသူများသည်တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်ထွက်လာသည့်လမ်းပေါ်တွင်အပန်းဖြေခရီးထွက်နေသည့်ငါးဖမ်းမြို့ဖြစ်သော Gros Islet သို့စီး ဝင်၍ မနက်အစောပိုင်းအထိတည်ရှိသည်။ ဘားများသည်သူတို့၏ဝင်ပေါက်များကိုဖွင့ ်၍ ဆူညံနေသောတေးဂီတကိုလမ်းထဲသို့သယ်ဆောင်လာသည်။ nibble ကုန်သည်များကငါးများ၊ ကင်များနှင့်ပူပြင်းသည့်ကိတ်မုန့်များကိုရောင်းကြသည်။ ပွဲစားများသည်ကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်တစ်ဖက်တွင်အရသာရှိလှသည့်ကြက်သားခြေထောက်တစ်ချောင်းနှင့်အတူကခုန်ကြသည်။
အနီးအနားရှိစီးပွားရေးနှင့်စိန့်လူစီယာ၏ဘဝလမ်းစဉ်အတွက်မျိုးစေ့များ အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သောအ ၀ တ်အထည်၊ မြေထည်၊ ထွင်းထုခြင်း၊ Perusing သည် Castries Central Market နှင့် Vendor Arcade နှင့် Choiseul Arts and Craft Centre တို့၌ဆူညံသံများထဲမှပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ စိန့်လူစီယာ
အိမ်ခြံမြေ / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု / လှူဒါန်းခြင်း
Saint Lucia ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်သွားရသလဲ
စိန့်လူစီယာသည်လှပတင့်တယ်လှပပြီးနေသာသောကာရစ်ဘီယံကျွန်းတစ်ကျွန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးနှင့်အဆင်သင့်သောရွှေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သင်သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့ဗီဇာကင်းလွတ်စွာသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏မိသားစုဝင်များကိုလည်းလျှောက်လွှာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စိန့်လူစီယာသို့လူကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင်ခရီးသွားရန်မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံပြီးမှပင်စိန့်လူစီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုလိုအပ်ချက်။ စိန့်လူစီယာအခွန်အကောက်ကင်းရှင်းသည့်စနစ်ကြောင့်သင်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေခွန်ကိုသင်မပေးဆောင်ရပါ။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်အသက် ၂၅ နှစ်အောက်မှီခိုနေသောကလေးများအပါအ ၀ င်ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေသောမိသားစု ၀ င်များနှင့်မှီခိုနေသောမိဘများနှင့် ၆၅ နှစ်ကျော်ဘိုးဘွားများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်၏သက်သောင့်သက်သာနှင့်လုံခြုံမှုကိုတိုးချဲ့ပေးလိမ့်မည်။ မင်း ထို့အပြင်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည့်မှီခိုနေသည့်မိသားစုဝင်များကိုမည်သည့်အသက်အရွယ်ကွင်းခတ်အပြင်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်
စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည် ၃-၄ လသာအချိန်ယူပြီးယခင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်အရည်အချင်းများရှိရန်မလိုပါ။ လျှောက်လွှာကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏နေရင်းနိုင်ငံမှစာရွက်ဖြင့်ဖြစ်စေတင်ပြနိုင်သည်။ အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးရက် ၆၀ အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
စိန့်လူစီယာ၏ရွှေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၃ ခုရှိသည်။ ပထမရွေးစရာမှာအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ လှူဒါန်းရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာအစိုးရအတည်ပြုထားသောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အနည်းဆုံး ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
တတိယရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀၀၀ နှင့်အနည်းဆုံးအမြဲတမ်းအလုပ် ၃ ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး စီသည်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀,၀၀၀ ၏စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ထည့်ဝင်ရမည်။ ပူးတွဲရွေးချယ်မှုအရအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအလုပ်အနည်းဆုံး ၆ ခုရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ နှင့်အစိုးရအပြောင်းအလဲအတွက်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည့်လုပ်အားခပေးချေရမည်။ ထို့အပြင်အိမ်ခြံမြေနှင့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကပါ နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာအတွက် စိန့်လူစီယာမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ စိန့်လူစီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများအားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန်စိန့်လူစီယာမှဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စိန့်လူစီယာမှစိန့်လူစီယာမှရွှေဗီဇာ (သို့မဟုတ်) စိန့်လူစီယာမှလည်းကောင်း၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှလည်းကောင်းနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်သာမကစိန့်လူစီယာမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။ စိန့်လူစီယာတွင် (သို့) ကမ်းလွန်တွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များတည်ထောင်ရန်နှင့်ဘဏ္planningာရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့်အခြားအရာများစွာပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား စိန့်လူစီယာအတွက်, ငါတို့တတ်နိုင်မှတဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စိန့်လူစီယာအတွက်စိန့်လူစီယာအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသားနှင့်စိန့်လူစီယာအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား။
စိန့်လူစီယာရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
စိန့်လူစီယာရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
စိန့်လူစီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
Real Estate မှစိန့်လူစီယာ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Saint Lucia တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှကောင်းသောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ စိန့်လူစီယာရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးစိန့်လူစီယာရှိကောင်းသောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - စိန့်လူစီယာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေ၏နိုင်ငံသားသည်စိန့်လူစီယာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ စိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီစိန့်လူစီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစိန့်လူစီယာရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်လူစီယာမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များရောင်းဝယ်သူများ၊
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် စိန့်လူစီယာတွင်နည်းပညာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် စိန့်လူစီယာတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် စိန့်လူစီယာအတွက် စိန့်လူစီယာရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်လူစီယာရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် စိန့်လူစီယာကိုစိန့်လူစီယာအတွက်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အထောက်အပံ့မရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်လူစီယာအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်လူစီယာအတွက် စိန့်လူစီယာရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စိန့်လူစီယာ စိန့်လူစီယာရှိအပြာစာပေများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား စိန့်လူစီယာအတွက်ရှေ့ရပျ စိန့်လူစီယာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : စိန့်လူစီယာနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AM Solutions INC မှ AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းစိန့်လူစီယာမှအာဏာပိုင်များကလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်စိန့်လူစီယာ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည်စိန့်လူစီယာအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်ဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားစိန့်လူစီယာမတိုင်မီနှင့်အတည်ပြုပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စိန့်လူစီယာအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအကောင်းဆုံးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအားကူညီပေးနေသည်။
စိန့်လူစီယာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ စိန့်လူစီယာအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ စိန့်လူစီယာအတွက်
စိန့်လူစီယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်စိန့်လူစီယာတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားအဖြစ်စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်စိန့်လူစီယာအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောကျွန်ုပ်တို့အားစိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆိုင်ဖွင့်စေသည်။ ။
စိန့်လူစီယာအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
စိန့်လူစီယာသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် စိန့်လူစီယာအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် Saint Lucia မှာအကြံဥာဏ်တောင်းဖို့လိုတယ် စိန့်လူစီယာအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် စိန့်လူစီယာအတွက်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်လူစီယာသင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် စိန့်လူစီယာတွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ စိန့်လူစီယာအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
စိန့်လူစီယာရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ စိန့်လူစီယာရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် စိန့်လူစီယာတွင်နေရာလွတ်တင်ပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Saint Lucia အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
စိန့်လူစီယာအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ စိန့်လူစီယာအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, စိန့်လူစီယာအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
Saint Lucia ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
နိုင်ငံသားအဖြစ်စိန့်လူစီယာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စိန့်လူစီယာ.
စိန့်လူစီယာတွင် Web Design
စိန့်လူစီယာတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စိန့်လူစီယာတွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စိန့်လူစီယာတွင် App Development
စိန့်လူစီယာတွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်စိန့်လူစီယာတွင်လည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ စိန့်လူစီယာတစ် ဦး ချင်းနှင့် ၄ င်းတို့မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများနှင့်အတူစိန့်လူစီယာအတွက်အတွေ့အကြုံ။ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးစိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကစိန့်လူစီယာ၏နယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ စိန့်လူစီယာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုစိန့်လူစီယာ၏နေထိုင်မှုကိုစိန့်လူစီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားသည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကစိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးလူနေအိမ်များအားစိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိအေးဂျင့်များနှင့်စိန့်လူစီယာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု။ | စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
စိန့်လူစီယာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်စိန့်လူစီယာရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်စိန့်လူစီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စိန့်လူစီယာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စိန့်လူစီယာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်စိန့်လူစီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စိန့်လူစီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလျှောက်ထားပါ။ စိန့်လူစီယာမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်စိန့်လူစီယာအတွက်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စိန့်လူစီယာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စိန့်လူစီယာအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်လူစီယာမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စိန့်လူစီယာရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး စိန့်လူစီယာအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စိန့်လူစီယာရှိဒုတိယပတ်စ်ပို့ကိုစိန့်လူစီယာ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်စိန့်လူစီယာကိုတရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒုတိယစိန့်လူစီယာသို့လျှောက်ထားပါ။ စိန့်လူစီယာအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ စိန့်လူစီယာရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်စိန့်လူစီယာအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများကစိန့်လူစီယာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကကူညီပံ့ပိုးပေးသောစိန့်လူစီယာအတွက်အကောင်းဆုံး၊ စိန့်လူစီယာမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စိန့်လူစီယာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယပတ်စ်ပို့ကိုယ်စားလှယ်များ စိန့်လူစီယာမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာရှိဒုတိယအပတ်ပတ်လည်ရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာကိုစိန့်လူစီယာ၏နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုစိန့်လူစီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ရရှိခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်စိန့်လူစီယာအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများကစိန့်လူစီယာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်စိန့်လူစီယာအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောစိန့်လူစီယာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံး စိန့်လူစီယာမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စိန့်လူစီယာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စိန့်လူစီယာအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
စိန့်လူစီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံမှအာဖရိကမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဥရောပမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း တောင်အမေရိကမှမလေးရှားမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အင်ဒိုနီးရှားမှစိန့်လူစီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ သီရိလင်္ကာမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နီပေါနိုင်ငံမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိန္ဒိယမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ယူအေအီးမှစိန့်လူစီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား။
Saint Lucia သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုပါ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ အိမ်ရာနှင့်မြို့ပြသက်တမ်းတိုးခြင်း
ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စွမ်းအင်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကျား၊
Trinidad နှင့် Tobago Coalition ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ရှေ့နေချုပ်ကုန်သည်များနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ဘဏ္ofာရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီးဌာန
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ အိမ်ရာ၊ မြို့ပြသက်တမ်းတိုးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြို့ပြလေကြောင်းလိုင်း
ပညာရေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ကျားမဆက်ဆံရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနှင့်မြို့ပြလေကြောင်း
ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေး
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး, ငါးလုပ်ငန်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း, သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စားသုံးသူရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန
လူမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ဒေသန္တရအစိုးရနှင့်ရပ်ရွာလူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေး
ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ အမွေအနှစ်နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောစက်မှုလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန
လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အားကစား ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊
အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ စွမ်းအင်နှင့်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာန
ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ သတင်းနှင့်အသံလွှင့်ဌာန
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး, စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှု, ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ဘဏ္ofာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှု၊ ပြင်ပရေးရာနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
တန်းတူညီမျှရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူမှုရေးတရားမျှတမှု၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး၊ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အားကစားနှင့်ဒေသန္တရအစိုးရများ
link ကိုမှ စိန့်လူစီယာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန စိန့်လူစီယာတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်